Ọkachamara Ngwọta Mmiri oyi na-ere n'ogbe nwere ezigbo onye nrụpụta na onye na-eweta ọrụ |Skylark
Ekwentị: +86 08385405559
Nhicha & Nlekọta anụ ụlọ
Ihe akụrụngwa akụrụngwa
Nkà ihe ọmụma anyị
Onye mmekọ anyị
Ọkachamara dị elu Chlorine Bleaching ntụ ntụ Wi...
Ime akwa akwa dị oke mma yana ọmarịcha Pe...
Degreaser kichin dị elu nke ọma nwere ọmarịcha arụmọrụ
Ọkachamara Bio-enzyme Deodorizer fesa maka anụ ụlọ E ...
Ọkachamara Pet De-Greaser nwere ọmarịcha arụmọrụ
Ọkachamara ncha mmiri oyi nwere ọmarịcha arụmọrụ
A na-emepụta ihe nhicha mmiri oyi maka ihicha linen ụlọ ọrụ, nke a ga-eji mmiri oyi na-ehicha ya ozugbo.Ọ bụ ncha alkaline na-adịghị ike, ọ gaghịkwa emebi akwa akwa ahụ.Meziwanye ịdị mma nke ịsacha akwa ma gbasaa ojiji nke ndụ ndụ linen, na-echekwa uzuoku na ojiji mmiri.
Gburugburu ụwaonye na-ere ahịa, onye na-ere ahịanaemeputanke ngwaahịa ịsacha akwa dị elu nwere afọ 21 nke R&D.Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa Logo gị dịka ihe ị chọrọ.Anyị na-elekwasị anya n'inye ngwaahịa dị mma, enyi na gburugburu ebe obibi, àgwà dị elu, na-etinye uche.
Ajuju ọ bụla anyị nwere obi ụtọ ịza, pls ziga ajụjụ gị na iwu gị.
Ihe nlele ngwaahịa bụ efu & dị
Ncha mmiri oyi
Ejiri ya maka ịsa akwa akwa, mkpuchi duvet, akpa ohiri isi na akwa ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ịsa ahụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-asa ákwà.
Wepu unyi isi ike, ntụpọ mmanụ, ntụpọ ọbara, ma mee ka ákwà ahụ na-egbuke egbuke.
OEM/ODM, N'ogbe, Retail
Ihe na-esi ísì ụtọ, nkọwapụta, agba, akpa, nkwakọ ngwaahịa
MOQ maka hazie
MOQ maka ngwaahịa
20KG / gbọmgbọm
DỊ KA PRO
DỊ KA RỊRỊRỊRỊ GỊ
Mmiri na-asacha mmiri oyi bara ụba na ihe ndị na-arụ ọrụ ionic, nke nwere ike wepu unyi isi ike, ntụpọ mmanụ, na ntụpọ ọbara, ma mee ka ákwà ahụ na-egbuke egbuke.
Na-ejikọta teknụzụ isi isii: mkpochapụ, mkpochapụ static, akwa dị nro na nke na-egbuke egbuke, ụfụfụ dị ala na ịcha ọcha dị mfe, iguzogide ihe fọdụrụ na ngwa ngwa.Ọ bụ ihe nchacha alkaline na-adịghị ike nke na-agaghị emerụ akwa linin ahụ, na-eme ka ịdị mma nke akwa akwa dị mma, na-agbatị ndụ ọrụ nke linen.Ọ bara ụba na ihe ndị na-etinye uche na ya, na-ewepụta ihe ndị na-arụ ọrụ nke ọma, nwere ikike mkpochapụ siri ike karị, ma na-ebelata ire ere nke ntụpọ.Protease agbakwunyere nwere ike ịbanye n'ime eriri akwa ma wepụ ntụpọ miri emi.
1. Enwere ike ibu ngwaahịa a na-akpaghị aka site na usoro nkesa akpaaka.
2. Usoro onunu ogwu nke ngwaahịa a dabere na ogo nke unyi:
Tebụl ntụaka maka usoro onunu ogwu nke 100kg / igwe ịsa ahụ
Usoro ntụaka ntụpọ ntụpọ (nkeji: g)
Unyi na-agafeghị oke
Unyi dị arọ
Tinye ihe enyemaka (hydrogen peroxide, emulsifier, uzuzu ịcha ọcha, chlorine bleaching powder, wdg) dị ka ọnọdụ dị n'oge ịsacha.
● Ka ụmụaka ghara iru eru.Zere kọntaktị na anya ma ọ bụ akpụkpọ ahụ, ọ bụrụ na kọntaktị, jiri mmiri na-asachapụ ma hụ dọkịta.Ọ bụrụ na iloro, biko hụ dọkịta.
● Debe n'ebe kpọrọ nkụ ma dị jụụ.
● Maka iji mpụga naanị.
Ajụjụ: Enwere m ike ịnwe nhazi ahaziri onwe m maka ngwaahịa & nkwakọ ngwaahịa?
A: Ee, nwere ike OEM dị ka gị mkpa.Naanị nye anyị ihe nka emebere gị.
Ajụjụ: Kedu ka m ga-esi nweta ụfọdụ nlele?
A: Nwere ike ịnye ihe nlele n'efu maka nnwale tupu ịtụ, kwụọ ụgwọ maka ụgwọ mbupu.
Ajụjụ: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ?
A: 30% T / T nkwụnye ego, 70% T / T itule ugwo tupu mbupu.
Q: Kedu ka ụlọ ọrụ gị si eme gbasara njikwa mma?
A: Anyị nwere nke siri ikenjikwa mmausoro, na ndị ọkachamara ọkachamara anyị ga-elele anya na ọrụ nyocha nke ihe anyị niile tupu ebupu ya.
Nke gara aga: Super Collar Cleaner nwere ọmarịcha arụmọrụ
Osote: Ọkachamara dị elu Chlorine Bleaching ntụ ntụ nwere ọmarịcha arụmọrụ
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-agbasawanye ahịa nke mba ofesi na nhazi ụwa.N'ime afọ atọ sochirinụ, anyị na-agba mbọ ịghọ otu n'ime ụlọ ọrụ iri mbupụ mbupụ na ụlọ ọrụ kemịkalụ dị mma nke China kwa ụbọchị, na-ejere ụwa ozi na ngwaahịa dị elu ma nweta ọnọdụ mmeri na ọtụtụ ndị ahịa.
Ọkachamara ntụpọ ọbara na-ehicha ntụ ntụ na E...
Acid na-anọpụ iche nke Ọkachamara Obere Okpomọkụ ...
ntụ ntụ ntụ ntụ dị nro kacha ewu ewu na Excell...
Ọkachamara Acid Whitening Acid nwere Excellen…
Ọkachamara Agba Bleaching ntụ ntụ nwere Excell...
Ọkachamara Main ịsacha ude nwere ọmarịcha...
adreesị:Otu 5, Obodo Shuangjiang, Obodo Hexing, Guanghan, Deyang City, Sichuan, PRC 618300
Oge dị:UTC+8 Mọnde - Satọde 8:30 ụtụtụ - 6:00 ehihie